Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2015 | November
Posted on November 30, 2015 by freeburma
အလားတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်း အဲဒီနေ့ တနေ့ထဲမှာပဲ နေ့လည် ၂ နာရီ ကျ ရင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံးတွင်းမှာရှိတဲ့ ဧည့်ရိပ်သာမှာ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က…
via Voice of America http://ift.tt/1Q8Pfpz http://ift.tt/Tf1V41
“ပြည်သူလူထု လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကို ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း လုပ်နိုင်ရမယ်။ ပြည်သူကို လုပ်စေချင်လို့ရှိရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ပြရမယ်ဆိုတာမျိုး အန်တီစုကပြောပါတယ်”
The post NLD အမတ်များ စံပြဖြစ်စေရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာကြား appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1juqeZ2 http://ift.tt/1iYMpUI
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးရွှေမန်း ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၅ ကြိမ်မြောက် သီးသန့်တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုရမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသား လိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1juqebj http://www.rfa.org
မြောက်ဘက်မှာ SSPP/SSA နေရာ ချထားပြီး အစိုးရ တပ်က ကားလမ်း တောင်ဘက်မှာ နေရာ ချထား ဖို့…..
SSPP/SSA နဲ့ အစိုးရ တပ်တွေ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မိုင်းနောင်-မိုင်းရှူး ကားလမ်း မှာ နှစ်ဘက် စစ်တပ်တွေေ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1TohnF1 http://ift.tt/Y2RpwJ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးရွှေမန်း သီးသန့် တွေ့ဆုံ
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်[…]
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးရွှေမန်း သီးသန့် တွေ့ဆုံ appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1juq9V2 http://burmese.dvb.no
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ည ကတော့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်ကို ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့က ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်တဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနောက်မှာတော့ အခြေအနေက ပုံမှန်ရှိနေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် ပလောင်နဲ့ ကိုးကန့်ဒေသက…
via Voice of America http://ift.tt/1TohjFs http://ift.tt/Tf1V41
Posted on November 29, 2015 by freeburma
via Voice of America http://ift.tt/1TeGDNj http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ	| Tagged Election, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
ဒေါ်စုနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ ဆွေးနွေးမှုများရှိဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းပြော
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီး လတ်တလောမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မကြာခဏ[…]
The post ဒေါ်စုနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ ဆွေးနွေးမှုများရှိဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းပြော appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1lRTHhb http://burmese.dvb.no
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်မတော် RCSS/SSAမှ တပ်သားတချို့ကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo: RFA
အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ RCSS /SSA သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီတို့ဟာ နှစ်ဖက်တပ်နေရာချထားရေး နဲ့ နယ်မြေသတ်မှတ်ရေးတွေအတွက် လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သွားဖို့ရှိတယ်လို့ RCSS /SSA က ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ Royal Star ဟိုတယ်မှာ RCSS/SSA က ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ ဗဟိုအလုပ် အ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1NgtpLo http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on November 27, 2015 by freeburma
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက မဲရုံမှူးများကို ဦးတည်တိုင်ကြားလာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ရပ်၊ ကျေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများကို တိုင်ကြားမှုများလာဟုဆို
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မဲရုံမှူးများအား ဦးတည်တိုင်ကြားလာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ရွေးကောက်အပြီးကာလတွင် မဲရုံမှူးဆရာ၊ ဆရာမများအား တိုင်ကြားသူများမှ အာရုံစိုက်ဦးတည် တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများကို တိုင်ကြားမှုများလာကြောင်း ဟင်္သာတခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရသည်။ “ အခု ကြည့်လိုက်တော့ အခါကျတော့ မဲရုံမှူးတွေက ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေပေါ့။ သူတို့က အတော်လေးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်ကြကိုင်ကြတဲ့အခါမှာ မဲရုံမှူးတွေအပေါ်မှာ တိုင်တဲ့သူတွေက သိပ်ပြီး အာရုံမစိုက်တော့ဘူး။ အခုဟာက ရပ်ကျေးကော်မရှင်တွေကို တိုင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ သွားတွေ့တယ်။ အစတုန်းက ထင်တာက မဲရုံမှူးတွေက Target ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တာ။ အခုက အဲလို ဖြစ်မလာဘူး။ အခုဟာက ကော်မရှင်က Target ဖြစ်လာတယ်” ဟု ဟင်္သာတခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင်က ပြောကြားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့နှင့် […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1jn3A4x http://ift.tt/1Ov7XVN
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များအနက် ၁၉၁ ဦး အာမခံငွေ ပြန်ရမည်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခံငွေပြန်လည်ရရှိမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှာ ၁၉၁ ဦး ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှ သိရှိရသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၂ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၅၄၆ ဦး ရှိပြီး အာမခံငွေ ရရှိသော အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉၄ ဦးနှင့် အနိုင်မရှိသော်လည်း ခိုင်လုံမဲရှစ်ပုံတစ်ပုံ (မဲပေးသူဦးရေ၏ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉၇ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၉၁ ဦး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ “ ခိုင်လုံမဲ ရှစ်ပုံတစ်ပုံ ရရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေသာ အာမခံငွေပြန်လည်ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ အာမခံငွေ ရရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာပြီးသည့် ရက်မှ […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1jn3wBO http://ift.tt/1Ov7XVN
အကူးအပြောင်းအတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ရုပ်လုံးပေါ်စမှာပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့နှင့်[…]
The post အကူးအပြောင်းအတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1OjS2w7 http://burmese.dvb.no
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ မိသားစုဝင်တဦးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းဌာနကို ပြောကြားပါတယ်။[…]
The post ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မြေးနှင့် တွေ့ခဲ့သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1jn3vxS http://burmese.dvb.no
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တခုလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သွားမည်
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးဆောင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က[…]
The post ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တခုလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သွားမည် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1kWriq1 http://burmese.dvb.no
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကြွေးမြီ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀၀ တင်ရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ပြည်ပကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀၀ တင်ရှိနေတယ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု[…]
The post မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကြွေးမြီ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀၀ တင်ရှိနေ appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1OjRIgN http://burmese.dvb.no
Posted on November 25, 2015 by freeburma
ရေဒီယို နားထောင်ရင်း တညကျတော့ ဘဘအစ်ကို တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားတဲ့သတင်းကြီး တက်လာပါရော၊ တက်လာတော့ ဒေါ်ဒေါ်ရော၊ ဘဘရော နှစ်ယောက်သား တယောက်နဲ့ တယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ခနတိတ်ဆိတ် ငေးငိုင်သွားကြတာ
The post မောင်သစ်လွင် (လူထု) ပြောပြတဲ့ လူထုဒေါ်အမာ အမှတ်တရများ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1T4ptSo http://ift.tt/1iYMpUI
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ တိုင်ကြားမှု ၈၀ တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အများဆုံးတိုင်ကြားဟုဆို
မြို့နယ်ရဲစခန်းများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အမှုဖွင့် တိုင်ကြားမှုပေါင်း ၈၀ အထိရှိပြီး ယင်းအမှုများတွင် တရားလိုပြု အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့သူ အများစုမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘက်မှဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ အကြီးတန်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာများအနက် ရဲအရေးပိုင်သော ပြစ်မှုဖြစ်စဉ်များကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့မှ စတင်ကာ ၁၅ ရက်အတွင်း အမှုဖွင့် တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ချက်ပါရှိသည့်အတိုင်း မြို့နယ်ပေါင်းစုံမှ ပါတီဝင်များနှင့် ပြည်သူအချို့က သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ ရဲစခန်းများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် တရားလိုပြု အမှုဖွင့်တိုင်ကြားမှု ၈၀ ခု လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1Tf1Bwb http://ift.tt/1Ov7XVN
NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းမြင့် နဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီ ဦးစိုးညွန့် တို့ကို ဒေါက်တာညိုညိုသင်း တရားစွဲ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းမြင့် နဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးစိုးညွန့်တို့ကို မမှန်မကန်စွပ်စွဲရေးသားထားတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေ မှုနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြား ထားပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Tf1zV3 http://www.rfa.org
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် နန့်ယားကျေးရွာ အထွက်မှာ ဒီကနေ့မနက်က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းရဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ဦးထံက လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲတာကြောင့် တပ်သား တစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1lKfyat http://www.rfa.org
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇(၁)နဲ့ ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ ၈၈ ကရင်မျိုးဆက် ကျောင်းသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးစောမောင်ကြီးနဲ့ DKBA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော်က တပ်သားတစ်ဦးကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်၂ နှစ်စီ ကျခံဖို့ ဒီနေ့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1lidwOe http://www.rfa.org